आजदेखि नेपालमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ सुरु, पैसा कति लाग्छ, कसरी लिने? - News - Radioupatyaka
Studio Time (NPT) : 09:15:05 AM
हालसम्म सामन्य नम्बर प्लेट प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधन बाहकले अबदेखि उच्च प्रविधि जडित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जाडन गर्नुपर्ने भएको छ। सोमबारदेखि(भदौ ६) औपचारिकरुपमा उद्घाटन हुने उक्त प्लेट जडान कार्यतालिका पनि यातायात व्यवस्था विभागले भोली सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।
हालसम्म कुनै नम्बर प्लेट जहाँबाट पनि बनाउन सकिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै विभागबाटै लिनुपर्ने नियम लागू गर्न लागेको हो।
सवारी सुरक्षा, उपभोक्ताको सुरक्षाको लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग सरकारको सँधै प्राथमिकतामा रहेको र त्यसैले नेपालमा यसको सुरुवात गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए।
सोमबारदेखि सुरु भएपनि प्लेट जडान सुरुमा सबैतिर सबैको लागि अनिवार्य भने हुने छैन। यसको लागि पहिलोचरणमा वागमति अंचलमा दर्ता सवारी र त्यसमा पनि सरकारी तथा कुटनीतिक नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्ने विभागको योजना छ।
त्यसपछि सबै ग्राहक र अन्य अंचल वा प्रदेशस्तरमा यो व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्दै लिइने विभागले जानकारी दिएको छ।
विभाागबाट लिने र दिने सेवा लामो, झन्झटिलो हुने आशंका गरिएपनि अन्य सेवाजस्तो नम्बर प्लेट वितरणको प्रक्रिया नहुने भट्टराईको भनाइ छ।
सवारी धनीहरुले सबै काम अनलाईनबाटै गरेर अन्तिममा प्लेट तयार भइसकेपछि विभागमा गएर जडान गर्नेमात्र भएकोले यसमा कुनै पनि झन्झट, लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नआउने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
विभागले दिएको जानकारी अनुसार ‘इम्बोस्ट नम्बर प्लेट’ राख्नको लागि कुनै पनि सवारी धनी एकपटकमात्र विभागमा जानुपर्छ। त्योभन्दा पहिलाका चरणमा उनीहरुले घरबाटै वा अनलाइनबाटै गर्न सक्छन्।
सबैभन्दा पहिला विभागको समय तालिका अनुसार सवारीधनीले ‘इम्बोस्ट नम्बर प्लेट’ जडानको लागि अनलाईन आबेदन भर्नुपर्ने छ। सावरीसँग सम्पूर्ण आवस्यक विवरणसहित उक्त आवेदन भरीसकेपछि निर्धारित रकम राष्ट्रिष्य वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गरेको भौचर नम्बरसहित पोष्ट गर्नुपर्छ।
त्यसपछि उक्त आवेदन विभागको सिस्टममा आउँछ र उसले ‘इम्बोस्ट नम्बर प्लेट’ उत्पादक डेकाटुर टाइगर पठाउनेछ । उत्पादक कम्पनीले विभागबाट आएको विवरणअनुसारको प्लेटमा रहेको आरएफआईडी(रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेसन) चिप्ससहितको स्टिकरमा सबै विवरण राखेर विभागमा पठाउँछ।
त्यसरी तयार भएको नम्बर प्लेटमा उल्लेख भएको विवरणमा सवारीधनीको फोन नम्बर पनि हुन्छ उक्त नम्बरमा प्लेट तयार भएको र जडान गर्न आउन सम्बन्धित धनीलाई म्यासेज जान्छ। त्यसपछि विभाग वा तोकिएको स्थानमा गई जडान गर्न सकिन्छ।
कुन साधनलाई कति शुल्क?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नलाई हालको भन्दा केही महंगो हुने भएको छ। विभागका अनुसार मोटरसाइकललाई २ हजार ५ सय, तीन पांग्रे सवारीलाई २९ सय, चारपांग्रे सवारीलाई ३२ सय र हेभी सवारीलाई नम्बर जडान गर्न ३६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने एको छ। सवारी धनीले फारम भर्नुभन्दा पहिलो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा विभागको खातामा दाखिला गर्नुपर्छ।